Suunka Orion: waa maxay, astaamaha, halyeeyada iyo nebulae | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 04/10/2021 17:45 | Astronomy
El Suunka Orion waa xiddig, taas oo ah, koox xiddigo ah ayaa sameeya shaxanka joometeriga xarriiquna waxay samaysaa suun gaar ah. Kooxdaani waxay ka kooban tahay saddex xiddigood oo is -raacsan, oo lagu kala magacaabo Alnitak, Alnilam, iyo Mintaka. Waxay ku yaalliin bartamaha Orion qaab ugaarsade ah. Dadka Giriigga ah tani waa suunka Orion, Carabtu waxay u tahay silsilad luul ah. Masriyiintu waxay moodaan inay yihiin irdaha samada. Mayanku waxay ugu yeeraan saddexda dhagax ee shooladda. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira saddex Mexico iyo qaybo kale oo ka tirsan Laatiin Ameerika Boqor sixir ah ama saddex mariis.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato suunka Orion oo ka socda qaar ka mid ah xiisaheeda.
2 Xiddigaha suunka Orion
3 Taariikhda iyo halyeeyada suunka Orion
Belt of Orion waa koox xiddigo ah oo ka tirsan kooxda Orion. Waxaa loogu yeeraa suunka maxaa yeelay waa qayb ka mid ah sawirka ugaadhsadaha Orion. Saddexda xiddig ee is -haya ee ka samaysan suunka Orion ayaa adduunka oo dhan looga yaqaan Las Tres Marías ama Tres Reyes Magos, magacyadooduna waa: Alnitak, Alnilam iyo Mintaka. Qaar ka mid ah astaamaheeda waa kuwan soo socda:
Wadamada Equatorial waxay arki karaan xiddigan sanadka oo dhan.
Waxay ka kooban tahay saddex xiddigood, oo u eg xarriiq toosan, oo leh suunka garter qaloocan.
Xiddigaha curiya waxaa lagu magacaabaa: Alnitak, Alnilam iyo Mintaka.
Waxay ku yaalliin Milky Way, 915-1359 sannadaha iftiinka ah ee Dhulka.
Waxaa iska leh Orion.
Xiddigaha suunka Orion
Kuwani waa xiddigaha ugu muhiimsan suunka Orion:
Alnilam: Waa xiddig weyn oo buluug ah oo ku yaal bartamaha saddexda xiddigood ee suunka Orion. Waxay leedahay taariikh 4 milyan oo sano ah waana tan ugu dhalaalka badan uguna fog suunka. Cufkeedu wuxuu 40 jeer ka badan yahay qorraxda heer -kulkeeduna waa 25.000 ºC. Waxaa lagu qiyaasaa inuu noqon doono xiddig weyn oo cas.
Alnitak: Waxay leedahay taariikh 6 milyan oo sano cufkeeduna waa 16 jeer qorraxda. Waa 700 oo sano oo iftiin ah annaga. Heerkulka dushiisa ayaa ku wareegsan 29.000 ° C, waxaana la rumeysan yahay inay aakhirka noqon doonto xiddig weyn oo cas.
Mintaka: Waa xiddig weyn oo buluug ah oo ka kooban laba xiddigood oo ikhtiyaar ah, aad bay u dhalaalaysaa, oo leh tiro 20 jeer ka badan Qorraxda iyo heerkulka dushiisa 31.000 ºC. Intaas waxaa sii dheer, waa xiddigga kaliya ee laga arki karo Waqooyiga iyo Koonfurta Poles.
Orion's Belt wuxuu ku yaalaa Collinder 70 xiddig xiddigle oo ku yaal badhtamaha xiddigiska Orion, 915-1359 sannadood oo iftiin ah oo Dhulka ah. Tani markeeda waxay joogtaa dhulbaraha samada. Waxaa laga arki karaa dhinca ololka Nebula iyo Horsehead Nebula oo la yiraahdo Alnitak. Intaa waxaa dheer, waxay ku dhowdahay xiddigga Eridanus, oo leh Taurus iyo Can Major iyo Minor. Suunka Orion wuxuu ka tirsan yahay xiddigaha Orion, waa kan ugu muhiimsan uguna caansan ee ku jira samada, sidoo kale waa xiddiga ugu weyn uguna dhalaalaya galaxdeena.
Taariikhda iyo halyeeyada suunka Orion
Sida ilbaxnimooyinkii hore ee kale ee dhismayaasha la jaanqaadi jiray Orion, Masaaridu waxay jaangooyooyinkooda Giza la safteen xiddigaha Orion. Wareegga Ahraamta wuxuu si toos ah ula xiriiraa xiddig kasta. Masriyiintu waxay aaminsanaayeen in suunka Orion uu yahay albaabka samada, iyo in ilaaha la kulmay meydka uu ahaa ugaadhsade ka yimid Orion, sidaa darteed waxay ku aaseen fircoonyadii Ahraamyadan.
Ilbaxnimo kale oo qadiimi ah oo la jaanqaadeysa Ahraamta xiddigaha ku jira suunka Orion waa ilbaxnimada Meksiko, oo ku taal burburka Teotihuacan.
Saddex Nin oo Caqli leh: Dad badan ayaa isku xira saddexda xiddigood ee suunka Orion iyo saddexda nin ee Xigmadda leh (Melchior, Gaspar, iyo Balthazar) oo ka soo safray bariga si ay ula kulmaan Badbaadiyaha Ciise waxayna siiyeen saddex xabbadood oo dahab ah si uu u bixiyo.
Saddexda Maryan: Xiddigaha suunka Orion waxaa lagu magacaabaa Tres Marías si loogu sharfo María, Marta iyo Margot. Intii ay jirtay boqortooyadii La, saddex haween ah oo maqaar cad leh, timo khafiif ah iyo indho buluug ah ayaa gaaray xeebta Mexico. Marwooyinkan waxaa soo dhoweeyey aborigines-ka maqaarka madow. Maria waxay dhashay wiil la yiraahdo Izus. Waxaa soo weeraray ragii jeclaa Ra. Waxay iyaga u ahayd inay u cararaan Jasiiradda Iberian, halkaas oo Maria ay ka aasaastay Toledo iyo Marta oo aasaastay Sara Gossa iyo Barcelona, ​​Margot waxay aasaastay Jatiwa.
Markii dambe, Marta waxay ku sii jeedday xeebaha Great Britain waxayna dhex gashay qaaradda Yurub, waxay dhistay Berlin, Warsaw iyo Amsterdam ilaa ay gaartay Moscow oo halkaas ku dhimatay. Marka labaad, María iyo Margot oo ay weheliyaan Izus waxay magaalo weyn ka dhisteen gobolka Amazon oo la yiraahdo El Dorado. Aakhirkii, waxay gaareen Iiraan iyo Hindiya, halkaas oo Margot iyo amiirkii boqortooyadii Ra ay ku dhasheen wiil ka yimid Buddha ama Tao.
Orion Nebula waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la barto lana sawiro meydadka samada ee cirka habeenka, sidoo kale waa mid ka mid ah astaamaha samada laga barto. Nebulae wuxuu daaha ka qaadayaa wax badan oo ku saabsan sida xiddigaha iyo nidaamyada meeraha ay ka samaysmeen burburka daruuraha gaaska iyo boodhka.
Horsehead Nebula waa qayb ka mid ah daruuraha ugu weyn Orion. Qaar badan oo ka mid ah sheekooyinka soo socda ayaa nebula u adeegsada qaab daruuro mugdi ah oo aad iyo aad u yar oo aan la awoodin. Qaar kale waxay qiyaasayaan inay jiraan xiddigo iyo meerayaal fara badan oo ku hor jira gudaha, gaar ahaan gadaasha nebula.
The Flame Nebula waa nebula soo -baxa oo ku taal kooxda Orion. Nebula wuxuu ku saabsan yahay 1.350 sano oo iftiin ah oo ka fog Dhulka oo leh baaxad muuqata oo ah 2. Flame Nebula waxay haysaa cirka 30-daqiiqo. Waa qayb ka mid ah gobolka xiddig-samaynta weyn leh, waa daruuraha molecular ee Orion.
The Flame Nebula waa guuto boqolaal xiddigood oo aad u yar, 86% kuwaas oo leh disc periplanetary. Xubnaha ugu yar waxay ku urursan yihiin meel u dhow bartamaha kutlada, halka xubnaha ugu da'da weyn laga helo gobollada dibadda.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto suunka Orion iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Suunka Orion
Waa maxay dabaylaha ganacsiga